Iingcebiso kunye nezikhokelo zokubhala incwadi yokuyeka ngokuzithandela | Ezezimali
Ileta yokuyeka emsebenzini ngokuzithandela
Ngenxa yezizathu ezahlukeneyo kukho ukubanakho ukuba ngaxesha lithile unokuzifumana urhoxa kwinkampani; oku kuyakufuneka ukubonisa incwadi yokuyeka ngokuzithandela, Ngamafutshane, luxwebhu onxibelelana ngalo nokurhoxa ngokuzithandela kumbutho.
Emva koko, siza kuchaza ngakumbi malunga nokuba yintoni incwadi yokurhoxa ngokuzithandela, nendlela yokubhala ngokuchanekileyo.
1 Uyisebenzisa nini ileta yokuyeka ngokuzithandela?
2 Bhala ileta yakho yokurhoxa ngokuzithandela
3 Umxholo weleta
5 Isongezo seleta
6 Unxibelelwano ngomlomo inkqubo yokupheliswa ngokuzithandela
6.1 Ukulungiselela ukumka kwakho kukuba uqwalasele la manqaku mane alandelayo:
Uyisebenzisa nini ileta yokuyeka ngokuzithandela?
Ileta Sisixhobo esisetyenziswa xa ufuna ukuyeka umsebenzi, nokuba kungenxa yokuba awuyithandi indawo yomsebenzi okanye ngenxa yokuba ufumene umsebenzi onenzuzo engcono.
Ke icebo lokuqala esinokukunika lona kukuba isigqibo sokurhoxa kufuneka ucingisiswe kakuhle, kwaye kufuneka usilinganise. izinto eziluncedo nezingalunganga.
Ukuba wenze esi sigqibo, kufuneka usisebenzise koku incwadi yokuyeka emsebenzini ngokuzithandela, ngoku uya kufunda ukuyibhala.
Bhala ileta yakho yokurhoxa ngokuzithandela
Kuyinyani ukuba kwi-intanethi sinokufumana i- imizekelo engapheliyo kunye neetemplate kwiileta zokuyeka ngokuzithandela. Kwaye nangona eyona nto ilula kukukhuphela enye yezi tempile kwaye uyigcwalise ngedatha yethu, kucetyiswa kakhulu ukuba ubhale le leta. Kule nto kukho uthotho lweengcebiso ekufuneka uzilandele, ukuze ubhale ileta elungileyo.
Ingcebiso yokuqala ekufuneka uyilandele, kunye neyona mpazamo iqhelekileyo, kukuba Ileta kufuneka ibe ngqo, imfutshane kwaye icace. Kwaye nangona kunokwenzeka ukuba ufunde lukhulu emsebenzini wakho kwaye ulixabisile uncedo onikwe lona ngalo lonke ixesha lokuhlala kwakho, injongo yale letha ayikokubulela kwaye nokuvuyisana nawe.
Ke gcina engqondweni ukuba i unobumba kufuneka abe mfutshane Kumanqaku amabini, owokuqala kukuba uthathe isigqibo sokungaqhubeki nenkampani, kwaye okwesibini ngumhla oceba ukwenza oku.
Ingcebiso yesibini kukuba, ngelixa kuya kufuneka ungqale, nokuba ayingomsebenzi wamaphupha lowo, kufuneka uwugcine usesikweni. Kungenxa yoko kucetyiswa ukuba uchaze ngendlela elula izizathu zokuba kutheni uthathe isigqibo sokushiya inkampani. Kukwacetyiswa kakhulu ukuba, nangona ezi zizathu ziya kuba yileta, uziveze ngokwakho kumntu onokuthi uxele
Ngoku masiqhubeke sihlalutya umxholo ekufuneka ubenayo le leta. Kuqala sifumana umhla okwicala elingasekunene leleta, lo mhla kufuneka uhambelane nalowo uzakuhambisa ileta kumntu ophetheyo. Icandelo lesibini lolwazi ekufuneka ulibandakanyile yile igama lomamkeli unobumba kumgca olandelayo kude kusekhohlo.
Icandelo elilandelayo lolwazi ekufuneka ulibandakanyile yindawo ye umthumeli weleta, Oku kunyusa imeko. Kumgca olandelayo kufuneka ufake igama lenkampani urhoxa kuyo, kwaye ekugqibeleni kufuneka ufake idilesi yale nkampani inye (nangona enyanisweni olu lwazi lunganyanzelekanga, olu lwazi longeza ubume obuninzi kwileta).
Emva kwexesha kufuneka ubhale elona candelo libalulekileyo, elingumzimba. Kuyacetyiswa ukuba uqale ngokubulisa ngokusesikweni ngokujongana nomamkeli weleta, ulandelwe sisizathu saloo leta, ngenxa yoku kufuneka uchaze ukuba uthathe isigqibo sokubangela ukurhoxa kwakho ngokuzithandela kwinkampani ekuthethwa ngayo, emva koko ubonise yintoni.usuku lokugqibela uceba ukusebenza kwinkampani. Okokugqibela, kuya kufuneka uphele ngegama lakho kunye notyikityo.
Ngokufanelekileyo, xa ushiya umsebenzi, uwenza ngocwangco nangendlela elula, kuba oku kwenza izinto zibe lula kwinkampani nakuwe njengomqeshwa. Ngenxa yoku, kucetyiswa kakhulu ukuba unike isaziso sokuyeka kwakho umsebenzi. Nangona ikhethwayo ukuba usihloniphe isaziso okanye hayi, kuya kufuneka wazi ukuba xa ungasihloniphi, kunokwenzeka ukuba inkampani iyakohlwaya ngokutsala iintsuku ongakhange uzinike ngaphambili.
Ngenxa yoku kungasentla, kuya kufuneka uthathele ingqalelo eyona ilungileyo ceba ukurhoxa kwakho kangangoko kunokwenzeka; Oku kuyakuba luncedo kwinkampani nakuwe. Kwaye okokugqibela, ngokubhekisele kumagama, kuyacetyiswa ukuba uchaze ukuba usuku lwakho lokugqibela lusuku lweveki, kuba, ukuba ukhetha uMgqibelo okanye iCawe njengomhla wokuhamba, inkampani kufuneka ikubhatale inxenye yoMgqibelo ukongeza kukugcina iyasebenza ngeCawa, kwaye ayisiyonto izakuba lula kwinkampani.
Omnye wemibuzo oqhelekileyo ngowokuba ngubani omele incwadi yokuzikhupha ngokuzithandela, Kwaye kukho amathuba amaninzi apho sinokuthi sicinge okokuqala; umphathi wethu ngqo, umntu ophetheyo kwimicimbi yabasebenzi, njl.
Impendulo ingahluka ngokuxhomekeke kwinkampani ebuzwayo, kodwa iodolo yezinto eziphambili ngokubaluleka zezi zilandelayo: ukuba kukho isebe lezabasebenzi kwinkampani, eyona nto intle kukuba ubanikele ngokuthe ngqo kubo; Kukho umntu ophetheyo kwisebe apho usebenza khona yiyo ke le kufuneka uye kuyo.
Kwimeko apho kwinkampani osebenza kuyo akukho Isebe le-HR, Eyona nto icetyiswayo kukuba uyinikezele ngokobuqu kumphathi wakho ngqo. Kukwacetyiswa ukuba xa uhambisa ileta yakho ucele irisithi yale leta ichaziweyo, kufuneka wazise nawe ukuba ngawaphi amanyathelo alandelayo anokukwenza ukwazi ukurhoxa, ngaloo ndlela ikwazise ngenkqubo yokupheliswa kunye nokuziswa kwamaxwebhu .
Unxibelelwano ngomlomo inkqubo yokupheliswa ngokuzithandela
Kubalulekile ukuba kuyo yonke inkqubo yokuyeka emsebenzini ugcine unxibelelwano olufanelekileyo ukuze uququzelele yonke inkqubo. Ke ngelixa i incwadi yokuyeka emsebenzini ngokuzithandela ibaluleke kakhulu kule nkqubo, kukwakhuthazwa kakhulu ukuba ulandele ezi ngcebiso zonxibelelwano zomlomo zilandelayo kwinkqubo yakho yokurhoxa.
Kuqala kufuneka uqiniseke ngesigqibo oza kusithatha, ke, ukuba sele sisigqibo esenziwe, qiniseka ukuba unxibelelana nomphathi wakho ngqo kuqala; Kwaye le yinto ekufuneka uyenzile kuba ngale ndlela unokulungiselela inkqubo yotshintsho apho kuya kufuneka ufumane umntu oza kuthatha isikhundla sakho.
Ukongeza, isicwangciso sokutshintsha sinokubandakanya inkxaso yakho kuqeqesho lomntu olandelayo oza kuthatha indawo yakho.
Ukuba umsebenzi wakho khange ube yindawo elungileyo yomsebenzi, okanye ukuba ubudlelwane bakho nomphathi wakho abufanelanga, into ekufuneka uyenzile kukuzilungiselela ukuba ukwazi ukujongana nonxibelelwano ngomlomo malunga Ukupheliswa kwemisebenzi kwinkampani; Yiyo loo nto kufuneka uhlale uzolile kwaye ujonge awona magama asezantsi ekunxibelelaneni nesigqibo sakho, uhlala unembeko kwaye uphepha ukungqubana okwenza inkqubo yokurhoxa ibenzima.
Ukulungiselela ukumka kwakho kukuba uqwalasele la manqaku mane alandelayo:
Kuqala kufuneka uyazi ingxelo yezizathu zokuba urhoxe emsebenzini, ngale ndlela uyakukwazi ukubonisa iingxoxo eziqinisekileyo ngesizathu sesigqibo sakho, kwaye okukhona uqinile, kulunge ngakumbi ukuze inkqubo yokurhoxa ithathelwe ingqalelo .
Njengomba wesibini, kuya kufuneka uthathele ingqalelo ukuba isimo sakho sengqondo kufuneka sibe sihle, ke ngalo lonke ixesha xa uziphendulela ngomlomo, qiniseka ukuba unombulelo ngeli xesha kunye nethuba elinikwe yinkampani lokufumana amava. Ngale ndlela unokuhlala ugcina iingcango zenkampani zivulekile.
Ingcebiso yesithathu kukuba uhlala uhlala ubambisene; Oku kuthetha ukuba, nangona uxanduva lwakho luza kuncipha, inkxaso yakho inokufuneka ukuba uqhubeke nenkqubo njengesiqhelo. Nangona kufuneka uqinisekise ukuba le ntsebenziswano kufuneka ibe kwicala lamaqela omabini.
Okokugqibela, kuya kufuneka uthathele ingqalelo ukuba uhlala uhlala uwukhumbula umhla omiselweyo wokuhamba, ukuze unxibelelane ngokucacileyo kwaye uhlale ucacile malunga nokusebenzisa ngokusemthethweni imisebenzi yakho.
Ukuphonononga inqaku kuya kufuneka uthathele ingqalelo ukuba Ileta yokuyeka ngokuzithandela kufuneka ibe mfutshane kwaye imfutshane, unganikeli lwazi ngaphandle kokuba luyimfuneko, oko kukuthi, kuya kufuneka uchaze isizathu sokuba uthathe isigqibo sokuyeka emsebenzini kwaye kufuneka ucacise nomhla oza kushiya uxanduva lwakho kuwo ngokupheleleyo.
Kwangokunjalo, kuyacetyiswa ukuba uhlale unxibelelana ngokuthetha ngomlomo, uhlala ugcina ubume kunye nobungcali. Ngalo lonke ixesha gcina engqondweni ukugcina unxibelelwano nomphathi wakho, kunye nesebe lezabasebenzi, nabantu osebenza nabo, kunye nelandela elizayo xa kunokwenzeka ucelwe inkxaso ukuze ukwazi ukuqeqesha umqeshwa omtsha.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ezezimali » Uqoqosho ngokubanzi » Ngqesho » Ileta yokuyeka emsebenzini ngokuzithandela
Ngokuphathelene noku, iinkampani ezinkulu, ngakumbi iinkampani ezinkulu zamanye amazwe, zijikile kwitekhnoloji zisebenzelana nabasebenzi babo, zisindisa ixesha kwaye zivelisa iziphumo ezingcono kwimibutho yokugaya italente, kwaye oku, kunjalo, kunefuthe elihle kwintsebenzo inkampani njengenkampani kwaye iyonke.
Elona qabane likhulu lokugaya ngokungathandabuzekiyo isoftware yokugaya kunye nokukhetha. Ngayo, imisebenzi yokusebenza inokuzenzekelayo, ngelixa abasebenzi bakho benokwenza uhlalutyo lweeprofayili kunye nomsebenzi wesicwangciso sokuqesha. Ukongeza, ngohlaziyo lwetekhnoloji ye-HR, kunokwenzeka.